FÖRNUFTIG ny fanadiovan-drivotra LOW-COST avy any IKEA | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 17/03/2021 15:00 | General, hevitra
Ny mpanadio rivotra dia nanjary vokatra notadiavina be, misy marika marobe izay niditra tamin'ny toerana matanjaka teo an-tsena ho an'ireo vokatra hafakely ireo, na izany aza, fotoana fohy talohan'ny nahatongavan'ilay goavambe soedoà fanaka hametraka demokratika ny vokatra iray izay voatendry ho manatrika trano maro kokoa.
IKEA dia nanangana ny FÖRNUFTIG, mpanadio ny vidin'ny knockdown manana tanjaka lehibe sy sivana tena mora vidy, nohalalininay lalina izany. Mijanona aminay ary fantaro ny antony mahatonga ity vokatra IKEA ity ho tonga mpivarotra indrindra ary hijoro amin'ireo vokatra lafo indrindra.
Toy ny tamin'ny fotoana hafa, nanapa-kevitra izahay fa hiaraka amin'ity famakafakana antsipirihany ity amin'ny horonantsary iray ahafahanao mahita ny famafana ny fanadiovan-drivotra an'ny IKEA, fa betsaka kokoa noho izany, hasehonay anao ny fomba fiasa, ny fomba fanovanao ny sivana ary mazava ho azy ny antsipiriany rehetra toy ny haavon'ny tabataba azony atao. Noho izany Manoro hevitra anao izahay hijery ny horonan-tsary ary manararaotra misoratra anarana amin'ny fantsonay, izay hanohizanay hatrany ny famoahana famakafakana mahaliana momba ny vokatra an-trano izay hanamora ny fiainanao.
1 Volavola sy fitaovana: Amin'ny fomban'ny IKEA tena izy
2 Karazan-sivana sy fahaiza-manadio
3 Ny haavon'ny fampiasana isan'andro sy ny tabataba
Volavola sy fitaovana: Amin'ny fomban'ny IKEA tena izy
Raha misy zavatra miasa dia aza mikasika izany, ary izany dia zavatra iray IKEA dia mazava tsara momba ny famolavolana sy ny akora amin'ireny vokatra ireny izay tsy misy ifandraisany amin'ny fanaka fotsiny. Ny vokatra mandeha ho azy ao an-trano, ny feo na ny gadaget dia miankina amin'ny plastika iray ihany, ny alokaloka ary ny endriny mitovy, ary izany dia manampy antsika hamorona tontolo iainana miray sy mampiavaka. araka ny hitanao amin'ny fanadihadianay ireo jiro sy mpandahateny izay noforonin'i IKEA niaraka tamin'i Sonos. Amin'ity tranga ity dia mahazo ny fankatoavako izy ireo, saingy tsy dia mahagaga loatra.
Dimensions: X X 45 31 11 sm
lanja: 3,92 Kg
Miloka amin'ny plastika fotsy na mainty izahay hifanaraka amin'ny mpanjifa sy ny tontonana volondavenona fotsy mora esorina. Ireo fitaovana rehetra ireo dia manome plus ny fahatsorana, ny fanoherana ary ny maivana amin'ny vokatra, lavitra ny mitady fahatsapana Premium, ny tadiavin'izy ireo dia ny manitsy ny vidiny sy ny faharetany. Any aoriana dia manana ny tohana isika, ary ny fanadiovan-drivotra IKEA dia azo apetraka amin'ny lafiny mitsivalana sy amin'ny lafiny marindrana. mipetaka amin'ny rindrina na azo entina tanteraka miaraka amin'ny tanany nylon sy ny tohanan'ny tongotra izay tafiditra ao anaty boaty ary mifanaraka amin'ny lokon'ny vokatra.
Ny baoritra dia misy baoritra izay marika marika hametahana azy amin'ny rindrina (aza ariana)
Samy azo amboarina daholo na ny kickstèt (tafiditra) na ny nylon
Samy vita amin'ny tanany nylon sy ny tohana amin'ny tongotra Azo esorina, izay hanamora ny fanovana ny hevitra amin'ny haingon-trano. Any aoriana dia hanana torolàlana tariby mifangaro izay ahafahantsika manome azy ireo toerana samihafa nefa tsy mila mahita tariby mihantona amin'ny rindrina. Ity tariby ity, etsy ankilany, dia malala-tanana ary manana adaptatera herinaratra manokana sy tompon'ny marika.
Karazan-sivana sy fahaiza-manadio
Amin'ity tranga ity ny mpanadio rivotra FÖRNUTFIG avy any IKEA Izy io dia azo ampiasaina amin'ny sivana roa miaraka aminy, na amin'ny sivana lehibe ihany. Izany dia satria ny iray amin'izy ireo dia tafiditra ao anaty fonosana ary ny iray kosa hovidiana ho safidy raha tiantsika. Ireo no sivana roa mandrafitra ny fanadiovan-drivotra IKEA
Sivana HEPA 12: Manana sivana malala-habe misy habe isika, ity sivana ity dia mandray 99,95% ny sombin-drivotra toy ny vovobony, manana fahombiazana hatramin'ny PM2,5 izy io, izay midika fa mitazona sombiny lehibe kokoa noho ny 2,5 nanometera izy. Hividy misaraka izy ity avy amin'ny 5 euro mivantana ao amin'ny IKEAna izany aza, singa iray no tafiditra ao anaty fonosana.
Sivana entona: Ity dia sivana manokana kokoa ary natao hampihenana ny fisian'ny fofona sy setroka, fa amin'ny fikasana hamorona fahatsapana fahadiovana sy fahadiovana amin'ny rivotra, fa tsy mitazona ny sombiny. Hanana toetra "fanampiny" foana io sivana io, izany no amidy misaraka. avy amin'ny 10 euro koa ao amin'ny magazay IKEA. Manadio ny rivotra amin'ny fanesorana isan-karazany izany loto maloto toy ny VOC ary formaldehyde.
Hiasa amin'ny fangatahana ilay fitaovana, izany hoe tsy maintsy ampandehanintsika izany. Tsy manana rafitra fandalinana rivotra na fampitandremana mihoatra ny mari-pamantarana LED momba ny satan'ny fanadiovana ireo sivana ary bokotra RESET ho azy ao ambadiky ny fonony aloha. Raha vantany vao azontsika izany, dia mahita ambaratonga telo amin'ny fanadiovana isika amin'ny alàlan'ny roulette eo an-tampony. Raha toa ka mampihetsika ny fahefana farany ambony, ny tahan'ny fandefasana rivotra maimaim-poana amin'ny sombiny (sanda CADR) dia 130 m3 / ora.
Ny haavon'ny fampiasana isan'andro sy ny tabataba
Ny haavon'ny tabataba dia hiankina mivantana amin'ny haavon'ny herinaratra voatondro, amin'ny ambaratonga farafahakeliny saika tsy azo jerena ny tabataba (hita amin'ny horonantsary etsy ambony io), na izany aza. ny haavon'ny tabataban'ny herinao lehibe indrindra dia mitovy amin'ny an'ny mpankafy nentim-paharazana amin'ny heriny ambany. Noho izany, ny ambaratonga farafahakeliny dia mamela fiainana andavanandro ara-dalàna ary na dia matory miaraka aminy aza no ampandehanana fa tsy amin'ny ambaratonga avo indrindra izay toa natao ho an'ny setroka na setroka be loatra. izany izy io dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny andavanandron'ny olona voan'ny aretim-po.
Amin'ny fampiasana isan'andro, io mpanadio io dia mamokatra fanjifàna isan'andro eo anelanelan'ny 2,5 sy 19 watt, kely dia kely, noho izany dia tsy tokony hiasa saina amin'ity fizarana ity isika. Tsara homarihina fa ny tariby fifandraisana dia malala-tanana ary ny tahony dia nanamora ahy kokoa tamin'ny fitsapana nataoko nitondrana azy namakivaky ireo efitrano samihafa. Ny fampiasana 45 minitra eo ho eo ao amin'ny efitrano misy ireo sivana telo dia manala tanteraka ny fofona ratsy amin'ny maraina mahazatra, Toy izany koa, ny fandidiana toy izany ao an-dakozia dia nanala tanteraka ny fofona avy amin'ny sakafo. Na izany aza, raha te hahalala amin'ny antsipiriany ny valiny momba ny vovobony sy ny sombiny hafa dia ilaina ny manadihady ny rivotra amin'ny fotoana tena izy, ary izany indrindra no lakilen'ny vidiny novaina.
Tsy misy fisalasalana IKEA miverena any vaky ny tsena ho an'ny fitaovana lamaody ho an'ny trano, ity mpanadio rivotra ity dia mampiseho ny tenany ampy ary manana endrika amina namana, manao azy amin'ny 59 euro fotsiny dia lasa safidy voalohany amin'ny mpanjifa mahazatra ny orinasa soedoà.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 17 tamin'ny 2021
Fanovana farany: Diaben'ny 14 tamin'ny 2021
Fitaovana sy famolavolana ekena
Sivana isan-karazany sy fahombiazan'ny fanadiovana
Tsy misy mpandalina kalitaon'ny rivotra
Ny tariby fifandraisana dia an'ny tompony
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » FÖRNUFTIG ny fanadiovan-drivotra LOW-COST avy any IKEA